Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged cloud, hosting, server on December 12, 2012 by saturngod. Changing Server
Leaveareply သောကြာနေ့ည က server စပြောင်းပါတယ်။ MZ ကို file တွေကြီးပဲ backup လုပ်လိုက်တာ 1GB ဖြစ်နေလို့ data တွေကို ပြန်စစ်ပြီး duplicate folder တွေကို ဖျက် မလိုအပ်တာတွေကို ဖျက်နေတာနဲ့ တော်တော်အချိန်ကြာသွားတယ်။ အခုထပ်ပြီး zip ပြန်လုပ်လိုက်တာ 510 MB ဖြစ်သွားတယ်။ အခုတော့ download ချဆဲ။ပြီးရင် upload တင်ရအုံးမယ်။ မနက်ဖြန်မှာ ပြီးအောင်တော့ ကြိုးစားဆဲပါ။ Dreamhost ကိုပဲပြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ VE ထက်စာရင် dreamhost က ပိုကောင်းမယ်ထင်တာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် memory ထပ်တိုးလိုက်ရုံပဲလေ။ သိပ်လည်း များများစားစားမကုန်တော့ဘူးပေါ့။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged dreamhost, hosting, MZ on August 14, 2010 by saturngod. MZ Server will change soon
4 Replies MZ server 18 ရက်နေ့ဆိုရင် expire ဖြစ်ပါပြီ။ Grid Server ($20/month) ကနေ VE server ($30/month) ကို ပြောင်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် file တွေ backup လုပ်ရမှာရယ် နောက်ပြီး upload ပြန်တင်ရမှာတွေကြောင့် ၁ ရက် ၂ ရက်လောက်တော့ Ornagai , MZ စတာတွေ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ MZ server ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ site တွေကတော့
အဲဒီ site တွေ ဝင်လို့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပြောင်းမယ့် နေ့ရောက်ရင် ထပ်ကြေငြာပါ့မယ်။ သောကြာနေ့ ညလောက် ပြောင်းဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ hosting အသစ်နဲ့ အတူ MZ 2.0 အတွက် ရေးထားတဲ့ user.mysteryzillion.org ပါလာမှာပါ။ လုံးဝ user တွေ သီးသန့်အတွက်ပါ။ ဥပမာ။။ jailbreak ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ virus ထိနေလို့။ စတဲ့.. စတဲ့… လုံးဝ enduser တွေအတွက် သီးသန့် site လေးပါ။ Beta version တော့ ရေးပြီးပါပြီ။ MZ 2.0 မိတ်ဆက်ကအတိုင်းပေမယ့် feature တွေတော့ အကုန်မပါသေးပါဘူး။ အဲဒါလေးရအောင်ပါ ve server ပြောင်းလိုက်ရတာပါ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged hosting, MZ on August 11, 2010 by saturngod. Stupid Webhostingpad
Leaveareply ကျွန်တော်တို့ MZ ရတော့မယ်ဆိုပြီး ညက ပြန်လုပ်ကြပါတယ်။ file တွေပြန်တင်ကြတယ်။ ကိုမင်းကျော် တင်ပေးတာ ၂ ရက်လောက်ကြာတယ်ဗျ။ အဲလောက်စောင့်ရတာ။ database ပြန်တင်မယ်ဆိုကော webhostingpad ရဲ့ backup ထဲမှာ ပါမလာပါဘူးဗျာ။ တော်တော်တော့ တင်းသွားတာ။ ဒါနဲ့ edu ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်တယ်။ အဲမှာကျတော့ database ပဲပါလာတယ်။ file ပါလာဘူး။ ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းတောင် မသိဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ တော်တော်ညံတဲ့ webhostingpad ဗျာ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in စိတ်အချဉ်ပေါက်မှုများ and tagged hosting on August 27, 2008 by saturngod. hostmonster Recommend မလုပ်ပါ
3 Replies အခုတလော hostmonster သုံးရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်တယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ hostmonster မှာ မဝယ်စေချင်ဘူး.. အခုတင်ထားတဲ့ ကြော်ငြာလည်း ဒီ post ပြီးရင် ဖြုတ်တော့မယ်.. တော်တော်လေးကို မကောင်းတာပါ… အဓိကတော့ copyright တွေအရမ်းလိုက်တယ်… နောက်ပြီး customer care အဲလောက်မကောင်းတဲ့ အပြင် server က တခါတလေ CPU က limit execess ဆိုပြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်… အထူးသဖြင့် copyright ညှိတဲ့ post တွေ မိသွားခဲ့ရင် ပြဿနာရှာတတ်ပါတယ်… သူက နာမည်ကြီးဆိုတော့ copyright ထိန်းသိမ်းလို့နဲ့ တူပါတယ်.. ML ကတော့ Hostmonster ပြဿနာလုပ်တာနဲ့ ၂ ခါရှိပြီ.. စာအုပ်တွေ ဖျက်ချခံထိတာ… စိတ်တောင် ကုန်သွားပြီ.. hostmonster ဝယ်မယ်အစား.. တခြား hosting ပြောင်းဝယ်မလို့… အဲ… ဒီဘက်ကဟာတွေကို အကုန်ပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်… ခက်တာက Hostmonster မှာ ၂နှစ်မှ စျေးသက်သာတယ်ဆိုပြီး ၂ နှစ်စာဝယ်ထားမိတယ်.. IP လည်းဝယ်ထားမိတော့ ပြဿနာပဲ… ML ကလည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးတယ်ဗျ… ebook တွေကို တင်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်လေ… နောက်တစ်နည်းတော့ ကြံရတော့မယ်… ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မဖြစ်ဘူး… တခြားနည်းတမျိုး ပြောင်းရမယ်… ၁ နှစ်ကျော်တော့ သည်းခံရအုံးမယ်ဗျာ…
copyright ညှိတာကို တင်တာ ကျွန်တော်တို့အမှားဆိုပေမယ့်… ကျွန်တော်တို့ ML ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ရည်၇ွယ်ချက်ကိုက လေ့လာသူတွေ လွယ်လွယ download ချလို့ရအောင်လေ… အခုတော့ နောက်တစ်နည်းပဲ စဉ်းစားရတော့မှာပေါ့ဗျာ….
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in စိတ်အချဉ်ပေါက်မှုများ and tagged hosting on March 11, 2008 by saturngod. Search for:
အထာဆိုသည်မှာ လုပ်နိုင်သောနည်း ဖြစ်နိုင်သောနည်းကို အထာလို့ခေါ်တယ်။ — ရေဆူဆရာတော် Job VacancyWe want IT TechnicianWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently) Tweets by @saturngod